यी ७ चिज मागेर कहिले प्रयोग नगर्नुहोस् नत्र ‘अनिष्ट’ हुन्छ!! – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /रोचक/यी ७ चिज मागेर कहिले प्रयोग नगर्नुहोस् नत्र ‘अनिष्ट’ हुन्छ!!
गत केहिसमय हाम्राे रितिरिवाजका अनुसार हामि सँग भएका केहि सामान वा छरछिमेकमा भएका केहि सामान पैचाे माग्ने वा दिने गर्थ्याे, तर याे रितिरिवाज भने अहिले हट्दै गएकाे छ । अरुसंग मागेर कुनै सामाग्री चलाउने बानि छ भने त्यो बानी त्याग्नु नै राम्रो हुन्छ ।
यो बानि आफै माथि समस्या निम्त्याउने कारक बन्ने धार्मीक मान्यता छ । धार्मीक मान्यता अनुसार कतिपय अवस्थामा अरुसंग सामान मागेर काम चलाउने बानिले नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न भई हानि पुर्याउने गर्दछ ।
तसर्थ ति सामाग्री प्रयोग मागेर गर्नबाट बच्नुपर्दछ,
१. काइँयो– स्वास्थ्य मात्र नभई भाग्यका दृष्टिमा पनि अरुको काइँयो प्रयोग गर्नु हानिकारक मानिन्छ । यसरी अरुको काइँयो प्रयोग गर्दा टाउकोसंग सम्बन्धित बाधाहरु उत्पन्न हुनसक्छ । यसका अलावा भाग्यमा विपरीत असर समेत पर्न सक्छ ।
२. ओच्छ्यान– धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ अरुको ओच्छ्यानमा सुत्दा समेत नकारात्मक असर पर्दछ । वास्तुदोष अनुसार अरुको ओच्छ्यानमा सुत्दा आर्थिक अभाव तथा नकारात्मक भाव पैदा हुन्छ । तसर्थ सकेसम्म अरुको ओच्छ्यानमा नसुत्नु नै राम्रो मानिन्छ ।
३. कपडा– अरु कसैको कपडा पहिरीनु समेत दुर्भाग्यको कारक मानिन्छ । मागेर कपडा लगाउँदा यसले स्वास्थ्यमा समेत हानी पार्ने गर्दछ । मान्यता अनुसार अरुको कपडा लगाउँदा त्वचाको संक्रमण हुनुका साथै नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न भइ अभाव निम्त्याउँछ ।
४. चप्पल– विवाह, पुजाआजा वा धेरै मानिस जमघट हुने कार्यक्रममा जाँदा साथीभाइका राम्रा चप्पल छन् भने मागेर लगाउने बानि हुन्छ ।
शनिको स्थान पैतालामा हुने भएकाले जसको चप्पल लगाइन्छ उसको संघर्ष र दुखः आफु माथि आउने मान्यता छ ।
५.घडी– कहिल्यै पनि अरुको नाडिमा बाधिएको घडि खोलेर आफुले लगाउनु हुदैन । मान्यता अनुसार घडीको सम्बन्ध व्यक्तिको जीवन र उसको समयसंग जोडिएको हुन्छ ।
६. कलम– अक्सर कार्यालय तथा स्कुल कलेजमा अरुसंग कलम मागेर काम चलाइन्छ । तर यस्तो बानीले आर्थिक र करियरको क्षेत्रमा हानि बेहोर्ने बनाउन सक्छ । कसैसंग कलम सापटि नलिनुहोस्, लिए पनि त्यो फिर्ता दिनुहोस् ।
७. औठी– अरुसंग मागेर लाउन नहुने अर्को सामाग्री हो, औठी । रत्नवाला औठी मात्र होइन कुनै पनि धातुको औठी समेत अरुको लगाउनु हुदैन । औठी लगाउने औलामा मानिसको जीवन र स्वास्थ्य जोडिएको हुन्छ ।